Opemha US$20 000 yekuvhiiwa itsvo | Kwayedza
Opemha US$20 000 yekuvhiiwa itsvo
14 Oct, 2021 - 14:10 2021-10-14T14:16:09+00:00 2021-10-14T14:16:09+00:00 0 Views
MURUME wechidiki wekuDomboshava ari kutsvaga rubatsiro rwekuti anovhiiwa itsvo dzake idzo dzisiri kushanda zvakanaka kunyika yeIndia sezvo dambudziko iri rave kuita kuti atadze kufema zvakanaka.
Blessing Zimbiru (22) anonzi ave nenguva refu achitambudzwa neitsvo idzi.
Muhurukuro nemukoma wake, VaBarnabas Zimbiru, vanoti pari kudiwa US$20 000 yekuti anovhiiwa nekuiswa imwe itsvo kunyika yeIndia mushure mekunge mumwe wemumhuri yake abvuma kumubatsira neitsvo.
“Munin’ina wangu Blessing akatanga kuita dambudziko rekutadza kufema zvakanaka iri gore rino, tichibva tamuendesa kuchipatara uko takazonzwa kuti akanga atova nedambudziko reitsvo ratova padanho repamusoro (acute kidney failure).
“Machiremba ekunze atakakurukura nawo akati mari yese inodiwa, kusanganisira yendege, inoita US$20 000,” vanodaro.
Vangada kubatsira murume uyu vanobata VaBarnabas Zimbiru panhamba dzinoti +263 773 248 495 kana kushandisa mabhengi anotevera: Steward Bank Eastgate Branch 1005529308, ZB Bank Avondale Branch 4113255642405, Western Union/World Remit kana kubvunza zvizere kuna VaBarnabas Zimbiru panhamba dzinoti 0773 248 495.